China umile eziphathekayo ikhonkrithi izityalo mveliso kunye nefektri UJusheng
I-HZS uthotho lokuxuba ikhonkrithi yesityalo yinto eyomeleleyo yokuvelisa kunye nezixhobo ezisebenza kakuhle ezinokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi. Ngokusebenza kwemveliso ephezulu, isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo olukhulu kunye naphakathi, ubunjineli be-axial yendlela kunye neefektri eziyimfuneko zokuvelisa iimveliso zekhonkrithi. Isixhobo esifanelekileyo sokuvelisa ikhonkrithi yorhwebo. Inkqubo yayo yokuxuba yamkela i-shaft shaft yokuxuba esinyanzelekileyo, esinokufana okuxubileyo, ixesha elifutshane lokuxuba, ubomi benkonzo ende yokunxiba amalungu, kunye nokusebenza okufanelekileyo kunye nokugcinwa. Yamkela itekhnoloji yolawulo lwamva nje njengenkqubo yokulinganisa i-elektroniki, ulawulo lwekhompyuter kunye nomboniso wedijithali. Izixhobo ezinobunzima be-elektroniki zixhotyiswe ngezixhobo ze-buffer kunye nemisebenzi yembuyekezo ezenzekelayo, ngokuchaneka kwemilinganiselo ephezulu. Isanti kunye nenkqubo yokondla igrabile yamkela ububanzi beherringbone yebhanti enkulu yokondla kwaye ixhotyiswe ngeendlela zokuhamba. Kukhethwe ngokufanelekileyo kwinani elikhulu leeyunithi zokwakha ukuvelisa ikhonkrithi efanelekileyo.
I-DKTEC inokuhlangabezana ngokulula neemfuno zabathengi ngokusebenzisa izixube zayo ezixubileyo zokuxuba ikhonkrithi zamandla ahlukeneyo kunye nokubalulwa.
Inezinto ezahlukeneyo zezixhobo zekhonkrithi ezingqinelanayo, kunye nomthamo wemveliso yemixube isusela kwi-60m³ / h ukuya kwi-180m³ / h. Sinokwenza izisombululo ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi, i-imeyile yethu: sales@dongkunchina.com
Ukongeza, kwisityalo esinye esimiselweyo sokuxuba ikhonkrithi kunye nabaxube, amandla emveliso anokufikelela kuma-cubic metres ayi-240 / ngeyure kunye nee-cubic metres ezingama-360 ngeyure.
Umba Iyunithi HZS25
Imveliso yethiyori m³ / h 25
Iziphumo zomxhubi m³ 0.5
Uhlobo lokondla Ukuphakamisa i-hopper
Imodeli yeBatcher m³ I-PLD800
Batcher (umthamo ngebhin) m³ 3
Ukubetha (inani lemigqomo) ipc 4
Amandla Umxhubi kw 18.5
Ukuphakamisa amandla kw 5.5
Ukukhupha ukuphakama m 1.5 / 2.7 / 3.8
Amanqaku ewonke ikg I-1500 ± 2%
Izinto zepowder ikg 300 ± 1%
Impompo yamanzi ikg ± 1%
Impompo eyongezelelweyo ikg ± 1%
Umba Iyunithi HZS35
Imveliso yethiyori m³ / h 35
Amandla Umxhubi kw 30
Ukuphakamisa amandla kw 7.5
Amanqaku ewonke ikg 2000 ± 2%
Izinto zepowder ikg 500 ± 1%
Umba Iyunithi HZS60
Batcher (umthamo ngebhin)
Ukubetha (inani lemigqomo)
Kuthe amandla amandla yokuhambisa ibhanti
Lobukhulu (L × W × H)
Ubunzima bokulinganisa ngokuchanekileyo Amanqaku ewonke
Umba Iyunithi HZS90
I-39.5 × 18 × 20.7
Ubunzima bokulinganisa ngokuchanekileyo
I-600 ± 1%
Ama-350 ± 1%
Umba Iyunithi HZS120
I-38 × 26 × 22
Umba Iyunithi HZS180
I-45 × 20 × 22
HZS series izityalo eziphathekayo eziphathekayo yenziwe yinkqubo yokuxuba, inkqubo yokubamba izinto, inkqubo yokulinganisa kunye nenkqubo yokulawula umbane. Ilungele indawo ezinkulu nezincinci zokwakha, imveliso yemveliso yekhonkrithi esele yenziwe kunye nezityalo ezivelisa imveliso.
Twin shaft umxube eziphathekayo zinamandla okuxuba olomeleleyo, umgangatho wokuxuba efanayo kunye nemveliso ephezulu. Inesiphumo esihle sokudibanisa ikhonkrithi ngobulukhuni obomileyo, ubunzima obomileyo, iplastiki kunye nobukhulu obahlukeneyo. Inkqubo yokuthambisa kunye nenkqubo ephambili ye-shaft drive zonke zingeniswe kwiphakheji yoqobo, kwaye indlela yokuvula umnyango we-hydraulic inokuhlengahlengisa ukuvulwa komnyango wokukhupha njengoko kufuneka. Ishafti sokuxuba somatshini ophambili wokuxuba samkela itekhnoloji yokuthintela ukunamathela ngokufanelekileyo ukuthintela ukudityaniswa kwesamente kwishafti. Isitywina sokugqibela seshafti samkela isakhiwo esisodwa sokutywina ukuthintela ukuvuza komdaka kunye nokuqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo kunye nexesha elide kuyo yonke inkqubo yokuxuba. Inkqubo yokucoca yamkela impompo yoxinzelelo lwamanzi ulawulo oluzenzekelayo kunye nolawulo olwenziwayo, Imingxunya yokuhambisa amanzi ibekwe ngqo ngaphezulu kwesilinganisi sokudibanisa, esenza ngcono ukuxubana, sonyusa inkungu yamanzi, sinciphise ukungcoliseka kothuli kwaye sisuse ngokufanelekileyo isamente. Kufanelekile kulwakhiwo olukhulu, iinkampani zekhonkrithi zorhwebo, njl.
Khetha umatshini wokudibanisa; indlela yokondla icwangciswe ngendlela "yemveliso" kwaye yondliwa ngumthuthi webhanti; isebenzisa iindlela ezimbini ezinobunzima bezinto ezizodwa kunye nezinto ezongezelekayo ezinobunzima; Ubunzima be-elektroniki, ulawulo lwePLC, umboniso wedijithali; t inobunzima obuchanekileyo, ukuchaneka kokubhabha okuphezulu, isantya esikhawulezayo, umsebenzi wolawulo olomeleleyo, ukusebenza ngokulula, njl.
Faka isicelo kwizinto ezingenisiweyo, ukusebenza okuthembekileyo; ulawulo olukude, amalungelo omsebenzisi anokunikezelwa, ukufezekisa iinkqubo ezisisiseko zolawulo lweprojekthi; ulawulo olukrelekrele, ulawulo oluzenzekelayo, ulawulo lwencwadi kwelinye; kunye nomyinge wokugcina, ukuhlawula ngokuzenzekelayo, ukuhlawula ngaphezulu, ulungiso olungaphantsi kwesikali; Izixhobo zinemisebenzi efana nokujonga ukusebenza, ukugcinwa kwelifu ledatha, ukuprinta, njl.
Inkqubo yokuThoba umzimba
Umgubo, amanzi kunye nezongezo zonke zilinganiswa ngezikali zombane; ukuchaneka kokubhabha kuphezulu kwaye imilinganiselo ichanekile; isamente, uthuthu lwempukane, kunye ne-hopper yokulinganisa amanzi ixhaswa kwisakhelo ngeeseti ezintathu zenzwa, enesakhiwo esizinzileyo kunye nokuthembeka okuphezulu; i-hopper ye-metering eyongeziweyo ilinganiswa ngenzwa yokuphakamisa inye
Isityalo ngasinye sokuxuba senzelwe abathengi ngokuthe ngqo!
Ixabiso lesityalo ngasinye sokudibanisa liyahluka ngenxa yoqwalaselo olwahlukileyo!
Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha eneenkcukacha zesitishi sokuxuba esincinci, ungatsalela umnxeba umnxeba kwintengiso ngokuthe ngqo: 0086-571-88128581
Ngokobumbeko olufunekayo, siya kubonelela ngesicatshulwa esichanekileyo kwaye masikuvumele ufumane ulwazi oludingayo ngexesha elifutshane!
Ukugcinwa komxhubi wekhonkrithi
1.Qinisekisa ukuba umatshini kunye nemo engqongileyo icocekile.
2.Clear izinto eziqokelelweyo kwi-hopper ngexesha lokwenza ukuba inzwa ibuyele kwi-zero ngokuqhelekileyo.
3.Check ukuba ioyile yokuthambisa kwindawo nganye yokuthambisa yanele, kwaye i-lubricator kwinkqubo yomoya kufuneka igcine ioyile eyaneleyo.
4.Jonga ukuba iinjini zombane kunye nezixhobo zombane zigqunywe shushu ngokugqithisileyo okanye ingxolo engaqhelekanga, nokuba ngaba isalathi siqhelekile na, nokuba ngaba inkqubo yesiginali ayisebenzi na.
5.Check kwaye ulungelelanise isilinda, ibhabhathane ivelufa kunye solenoid ivelufa rhoqo ukwenza ukuvulwa kunye lokuvala ukuhlangabezana neemfuno.
6.Jonga inkqubo nganye rhoqo, kwaye ujongane nayo ngexesha ukuba kukho ukuvuza kothuli, ukuvuza kwegesi, ukuvuza kweoyile kunye nokuvuza kombane.
7.Umxube kunye nokukhutshwa kwehipper kufuneka kucocwe rhoqo kwiiyure ezine ukunqanda intsalela yekhonkrithi ekudibaniseni nasekuthinteleni ukusebenza kwesiqhelo.
Ukutshintsha konke kufuneka kukhulule amanzi angaphakathi kwisiguquli somoya, itanki yokugcina umoya kunye nefilitha, kwaye kuphelise ukungasebenzi kakuhle okwenzeka ngexesha lokusebenza.
9.Ivelufa yamabhabhathane, umxubeki, iveluva yesolenoid, isihluzi somoya kunye nesixhobo senkungu yeoyile zigcinwa ngokwemiyalelo efanelekileyo.
Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Inkqubo yokuDibanisa, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo,